မန္တလေးမှာ တရုတ်-မြန်မာ ကုန်သည်တွေ ရိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မန္တလေးမှာ တရုတ်-မြန်မာ ကုန်သည်တွေ ရိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့
မန္တလေးမှာ တရုတ်-မြန်မာ ကုန်သည်တွေ ရိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့
Posted by ဂျစ်စူ on Jun 27, 2011 in Copy/Paste, Myanma News | 27 comments
ပုံတွေကတော့ Aung Shin facebook မှ ဖြစ်ပါတယ်
ဖြစ်စဉ်ကတော့ သိန်း ၄၀နဲ့ ဈေးဆိုင်ထားတဲ့ ကျောက်လွှာထုပ်ကို တရုတ်
ကုန်သည်က ၀ယ်မယ်ဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုး တိပ်ပတ်ထုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ရောင်းမယ့်ဗမာကုန်သည်က ဈေးပိုလိုချင်လို့ ထပ်တောင်းပေမယ့် အကြောင်းမပြန်လို့ တခြားကုန်သည်ကို တိပ်ပတ်ထားတဲ့အထုပ်ကိုဖြည်ပြတော့ အရင်ကုန်သည်ထက် ၅သိန်းပိုပေးလို့ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီမှာတင် အရင်လေနဲ့တည့်ထားတဲ့ တရုတ်က သူ့ကိုမရောင်းလို့ဆိုပြီး ဗမာကုန်သည်ကို သူ့အခန်းခေါ်ပြီး တရုတ်တွေက ၀ိုင်းထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီမှာတင် ဗမာကုန်သည်အသိုင်းအ၀ိုင်းက မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး တန်ပြန်ထိုးနှက်ရာကနေ တရုတ်ပိုင် ဆိုင်ခန်းနံပတ် ၈ နဲ့၉ကိုဖျက်စီးလိုက်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုလို သတင်းကို ဓာတ်ပုံနဲ.တကွ ဖော်ပြပေးတာ.. နောက်လဲ အားပေးနေပါမယ်…
ဒါနဲ့ ကြားတာက အရိုက်ခံရတဲ့ သူက ဆေးရုံတင်ထားရတယ်ဆို…
တရားဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိစေရဘူး လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ လူကြီးမင်းများ ဒီအမှုကို ဘယ်လိုများ စီရင်မှာပါလိမ့်…..
သတင်းက.. မြန်မာလူမျိုး(တရုတ်ဆိုခံရသူများ)နဲ့..တရုတ်ပြည်ကတရုတ်ကို ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးရောချထားတယ်..။
တရုတ်ပြည်ကလည်း.. လက်နက်နဲ့..ငွေအင်အားတောင့်လာပြီမို့ … အင်အားလက်တည့်စမ်းဖို့.. လက်ယားနေပုံရတော့ကာ…
အနောက်အုပ်စုက… အရှေ့ အလယ်ပိုင်းနဲ့.. မြောက်အာဖရိက.. ပါဝါပြ..လုပ်ပြနေတာကို… တရုတ်ကထိုင်ကြည့်နေတာ အလကားတော့ မထင်မိဘူး..။ သူ့အလှည့်စောင့်နေတာပဲ..။
အနေမတတ်ရင်… နေရင်းထိုင်ရင်း.. ကြားညပ်သွားဦးမယ်…။
အကျယ်မဖြစ်အောင်.. ပြသနာတက်စေတဲ့.. တရုတ်(တွေ)ကို… တရုတ်အစိုးရလက်ပြန်အပ်ပြီး.. နိုင်ငံအတွင်း..နစ်နာမှုတွေအတွက်.. လျှော်ကြေးတောင်း… ငွေပေးသင့်သူတွေ..ပေးလိုက်ကြဖို့ကောင်းတယ်..။
တရုတ်ပြည်က.. အင်အားလက်တည့်စမ်းချင်နေတဲ့ ဒီရက်ပိုင်းတက်လာတဲ့.. သတင်းတွေ…။
Aquino wary of ‘no-invasion’ vow
Asks why China had to make it
NAGA CITY, Cebu. – President Aquino on Monday expressed reservation over China’s statement that it will not invade the Philippines.
China, Vietnam govt’s vow to cool South China Sea tensions
နို့မို့ စီးပွားရေးကျွန်ပြုခံနေရတာ ပိုဆိုးတယ်
ဘေဂျင်းနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး ၀ါရှင်တန်နဲ့ ပြန်ခေါ်ရင် သာတောင်ကောင်းသေး
ကျုပ်ကတော့ သူချ ကိုယ်ချပဲ
တစ်နိုင်ငံလုံး ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းသွား နားအေးတာပဲ
ခုတော့ သမ္မတက ဘေဂျင်းကို အဘခေါ်တာနဲ့ပဲ
ကျုပ်တို့ကပါ လိုက် အဘနေရတယ်
ရောင်းပြီးသားကျောက်ကို ငွေထပ်တောင်းတာ ရောင်းသူဖက်က မှားတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျောက်ဝိုင်း ထုံးစံတော့ မသိဘူးပေါ့လေ။
နောက်တပိုင်းက ရောင်းသူတဦးထဲကို ဝယ်သူအုပ်စုဝိုင်းဖွဲ့ ရိုက်တာပါ။ သာမာန်အားဖြင့် သူများနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးလုပ်တာမို့ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ရပါတယ်။ လုံခြုံရေးအတွက်လည်း ရဲ၊ နယ်မြေခံပုဂ္ဂိုလ်များကို လိုင်းဝင်ထားကြမှာပါ။ အဲဒီလမ်းကြောင်းရှိတာနဲ့ နယ်ခံတွေကို ထင်သလိုပြုမူ ဆက်ဆံတာတော့ အရုပ်ဆိုး လွန်းလှပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုး အနေအထားကို ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါပြီ။
ခေါင်းစဉ်ကိုက ပွဲ မဆူ ဆူအောင်လုပ်ထားတယ်
ဘာဆိုင်လဲ ရောင်းသူဝယ်သူ စည်းဖေါက်ကြလို့ ဆော်ကြတဲ့ကိစ္စ
တိုင်ပြည် မဆူ ဆူအောင် လုပ်နေကြတာလား
မန်းလေးမှာ တရုတ်တွေ တော်တော်ပေါနေပြီ ထင်တယ်
သတင်းတင်ပြနိုင်သူကို ချီးကျူးတယ်ဗျာ ..။ ကျနော်တို့ သိတောင်မသိလိုက်ရဘူး။ အခုမှသိရတာ။
အရင်ဆုံး ဒီသတင်းကို အညာနွေတမာမြေက ဖတ်ရတာပါ
ပုံတွေမပါသေးတော့ မယုံလို့ဒီတိုင်းထားထာ..
နောက်မှ Aung Shin’s Facebook မှာ ပုံတွေ့ ရတာနဲ့တင်လိုက်တာပါ
ဥာဏ်မီသလောက်ဝင်ဆွေးနွေးရရင်တော့ ၂ ဘက်လုံး မှားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်
အရောင်းအ၀ယ်တည့်၊စာချုပ်ချုပ်ပြီးသား၊တိပ်ပတ်ပြီးသား ဆိုမှတော့ တခြားတရုတ်တစ်ယောက်ကို မရောင်းသင့်တော့ဘူး..
ဒါကို ကိုမော်ကြီးက ကတိမတည်ပဲ သွားရောင်းမိတော့..မှားတာပါပဲ..
ကိုတရုတ်ကြီးကလဲ သူများနိုင်ငံရောက်နေမှန်းမသိ..ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ်မဆင်ခြင်ပဲ အုပ်စုဖွဲ့ ဝိုင်းရိုက်ရာက သူမှား၊ကိုယ်မှား ဖြစ်ကုန်တာပေါ့.ဗျာ..
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လူမျိုးထိရင်တော့ ၀ိုင်းတွယ်ကြမှာပဲလေ..
ဖြစ်တဲ့ညကပဲ တရုတ်ကုန်သည်တွေကို စခန်းကနေပြီး တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်တွေက ခေါ်ထုတ်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်..ဘာအတွက်လဲတော့ မသိပါ
ဘာမှတော့ မပြောလိုပါ …
သူမှားကိုယ်မှား ….. ဘယ်သိမပြု မိမိမှု …..
မန်းတလေးမှာက တရုတ်က ဗမာလူဦးရေနဲ့ ဆတူလောက်ပဲ ထင်ပါတယ်နော်။
ညကတော့ bbc မှာလာသွားတယ်ပြောတာပဲ။ဖတ်ချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲ..။နောက်ကြားရတာတစ်ခုက မန္တလေးက တို့မြန်မာတွေ ကရဲတွေကို ကိုယ့်လူမျိုးဘက်လိုက်မှာလား တခြားလူမျိုးဘက်လိုက်မှာလားဆိုပြီး ပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့ပြီး။ ကမ္ဘာမကျေ(နိုင်ငံတော်သီချင်း)ကိုဆိုသွားသေးသတဲ့။
ကြားထဲက မြေစာပင်ဖြစ်နေတဲ. ပြည်သူ
မြန်မာပြည်မှာ မွေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တရုတ်လူမျိုးလား ၊
ဟိုမှာမွေးတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား တရုတ်လူမျိုးလား ၊ ကွဲကွဲပြားပြားလုပ်စမ်းပါဗျို့ … ။
ဟိုကကောင်တွေ ဒီမှာလာ ကျယ်နေလျှင်တော့ ဆော်လိုက်တာ မှန်တယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဘာမှန်းသိအောင် ဗျင်းပစ်လိုက်ရမယ် ။
တရုပ်ကို ဖင်ကုန်းပေးရေးတွေ ဟောပြောနေပြန်ပြီ
အမှိုက်ကစ ပြသာဒ်မီးမလောင်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒါက ကုန်သည်တွေကကြားက ပြဿနာပါ။
လူမျိုးရေးနဲ့ နွယ်ပြီး မမြင်လာအောင် တာဝန်ရှိသူတွေက မျှမျှတတဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သားတရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဟိုကလာတဲ့တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလောက်ပိုက်ဆံလေးနဲ့ ၀ိုင်းရိုက်ရဲတယ်ဆိုတာ တရားဥပဒေကို မျက်စေ့ထဲမထားရာ ရောက်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် မျက်စေ့ထဲမထားတာဆိုတာ တာဝန်ရှိသူတွေ သုံးသပ်သင့်တယ်။
သတင်း အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့အမြင်တော့ အဲဒါ ရိုးရိုးရန်ပွဲပါ။
ဒီလိုမျိုး ထိုင်းမှာသွားလုပ်ရင် အသတ်တောင်ခံရနိုင်တယ်။
ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီး ဟိုဘက်နိုင်ငံက ပြဿနာလုပ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်
ကျောက်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေကို မေးကြည့်တော့ အခုလိုအရောင်းအ၀ယ်ပျက်တယ်ဆိုတာ မဆန်းသောကိစ္စတွေပါတဲ့။
ဒီမှလုပ်ကြကိုင်ကြရောင်းကြ၀ယ်ကြတာက နုတ်ကတိနဲ့ဘဲလုပ်ကြတာဆိုတော့ တစ်ဖက်ဖက်က ဖျက်သွားလဲ
ဘာမှလုပ်မရသလို နောက်အဲဒီလူနဲ့အလုပ်မလုပ်တာက လွဲလို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ကြတာများပါတယ်။
အခုကိစ္စကတော့ အရောင်းအ၀ယ်ပျက်တယ် အုပ်စုများတဲ့ကောင်က ရောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ထဲဆိုပြီး
ခေါ်ဗျဉ်းတယ် အဲတော့ အဗျဉ်းခံရတဲ့ကောင်ရဲ့ ဘော်ဒါတွေက လူစုပြီး ပြန်ဗျဥ်းတယ်။
ဒါရောင်းတဲ့ ၀ယ်တဲ့နေရာမှာ တိတိကျကျ မလုပ်ကြလို့ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါ.။
အဲတော့ ဒါလေးကို အကြောင်းပြုပြီး ရှုပ်အောင်မလုပ်ချင်ပါနဲ့။
တကယ်ဖြစ်လို့ ဒုက္ခရောက် တနေ့လုပ်မှတနေ့စားရတဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားဘဲ အထိနာမှာပါ။
I heard someone say it describe in VOA, I was wondering if they r trying to exaggerat this issues and affect the diplomatic relationship of the two countries, but, unfortunately, Burma-born Chinese ethnic will be the victims if it goes wild.
I heard someone say it describe in VOA, I was wondering if they r trying to exaggerat this issues and affect the diplomatic relationship of the two countries, but, unfortunately, Burma-born Chinese ethnic will be the victims if it goes wild…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နိုင်ငံသား ကိုယ် ကာကွယ်ရမှာပဲ။ တရုတ်အနွယ်ဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား လည်း မြန်မာလူမျိုးပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ့်မြေအပေါ် လာစော်ကားတာကတော့ ဟိုဟို ဒီဒီ အကြောင်းမပြပဲ ဥပဒေကြောင်းအရ ဆွဲထည့်လိုက်ရမှာပဲ။
ဥပဒေအရ အရောင်းအ၀ယ် ဖောက်ဖျက်တဲ့သူကို ဥပဒေအတိုင်း တရားမမှုနဲ့ အရေးယူသင့်ပါတယ်။ စရိုက်တဲ့သူကိုလည်း ဥပဒေနဲ့အညီ ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ အရေးယူသင့်ပါတယ်။ ပြန်ရိုက်တာဟာလည်း ရာဇ၀တ်မှု မြောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားကို အကာအကွယ်ပေးတာ ဥပဒေနဲ့အညီ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီရန်ပွဲလေးကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ၀ါဒဖြန့်သူတွေရဲ့ သွေထိုးစကားကို နားဝင်သွားရင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နယ်စပ်မှာ မညိမ်မသက်ဖြစ်နေချိန်မှာ ဒီလိုအချိန်ကိုက်ဖြစ်လာတာ တွေးစရာတခုပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက် ဟာတနိုင်ငံလုံးသိတာမို့ ပညာပေးတတ်ရင် တရားဥပဒေဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာကို ၊ တရားဥပဒေ ကို ပြည်သူတွေ လေးစားလိုက်နာလာအောင် စံပြ ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားက ဥပဒေက မဆိုးဘူးလို့ပြောရမယ်.. ပြဿနာ ဖြစ်ရင် တရားရုံးမှာရှင်း ထိုးတာ ရိုက်တာ ဆိုရင် အရင် စပြီးလုပ်တဲ့သူက အရှုံးပဲ တယောက်နဲတယောက် အော်နေကြပေမဲ့ ဘယ်သူမှ စပြီး မလုပ်ရဲဘူး ………..